Nkịtị, na jeans na akpụkpọ ụkwụ | Bezzia
Maria onyekwere | 13/09/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi
Mgbụsị akwụkwọ na -abịaru nso mana a ka nwere ọtụtụ ụbọchị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'oge ọkọchị, nwere oke okpomọkụ nke anyị ka ga -ekpori ndụ. Anyị nwere ike ịga n'ihu na -eyi uwe anyị ọkacha mmasị n'oge okpomọkụ uwe wee si na ha mepụta ụdị dị ka ndị a nwere jeans na akpụkpọ ụkwụ anyị na -atụ aro taa.
Ọ ka dị oke ọsọ ịwepụ akpụkpọ ụkwụ na tankị, Ọbụna n'ebe ugwu! O yikarịrị ka oge ụfọdụ anyị agaghị eyi uwe elu nwere aka dị ogologo, mana anyị agaghị ewepụ akwa tank n'oge adịghị anya mgbe anyị nwere ike tinye ha n'elu uwe elu na jaket ndị a ka ha wee lebara anya n'oge oyi.
1 Ndị na-agba ehi
3 Uwe elu
Ndị na-agba ehi
Jeans bụ uwe na -adịghị adịte aka; oge anọ nke afọ na -eso anyị. Onye ọ bụla n'ime anyị nwere ọkacha mmasị anyị na ndị ahụ bụ ndị anyị ga -eji mepụta uwe nkịtị na jeans na akpụkpọ ụkwụ iji nwee ọ enjoyụ ndụ kwa ụbọchị n'oge a n'afọ. Ọ bụ ezie na ekwesịrị ikwu ihe niile, ihe niile na -egosi na ọdịda a ọ ga -abụ atụmatụ kwụ ọtọ ga -ewere ọnọdụ etiti.
Kedu ihe ị ga -eme n'ụbọchị? Ọ bụrụ na ị ga -esi ebe a gaa ebe ahụ ị nwere ike chọọ nzọ na akpụkpọ ụkwụ dị larịị. N'afọ ndị a, ụdị akpụkpọ ụkwụ shọvel nwere ọrụ dị mkpa, n'agbanyeghị na ọ bụghị anyị niile na-eso ya na-eje ije. Ọ bụrụ na ị so n'òtù ikpeazụ a, ị nwere ike chọọ ịkụ nzọ na akpụkpọ ụkwụ nwere eriri dị warara jikọtara na nkwonkwo ụkwụ ya na ikiri ụkwụ dị ala ma ọ bụ ọkara.
Anyị nwere ọtụtụ ohere iji mezue ụdị ejiji anyị. T-uwe elu na ọsụsọ Ha ga -abụ ndị enyi kacha mma imepụta uwe nkịtị nke nkasi obi jupụtara na ya. Ee, yana uwe elu na -enweghị eriri, ọ bụ ezie na ijikọ ndị a na ngwa kwesịrị ekwesị ị nwere ike nweta ụzọ iri ịpụ n'ehihie ma ọ bụ n'abalị dị ka Sheryl na -eme.
Ahịhịa na -adịghị ahụkebe nwere nkọwa ruffle na uwe elu nwanyị na -acha afụfụ Ha dị mma iji nweta ọmarịcha ịhụnanya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ nzọ n ’uwe elu dị larịị na akwa mmiri ozuzo ị nwere ike nweta anya na -anọpụ iche, nwekwuo uche na usoro. Ee, uwe elu nwanyị na uwe elu nwere ifuru ifuru mara mma bụkwa nhọrọ, akara nke iguzogide mgbụsị akwụkwọ nke na -abịa.
Ị nwere mmasị ụdị uwe a nwere jeans na akpụkpọ ụkwụ? Kedu nke kacha amasị gị?
Onyonyo - @IGIHE, @iheanacho, @nwanyi_uche, @onyedikachi_, @bartabacmode, @ cindy.octaviany, @karinemilyblog, @ frenchstyle.agi, @walkinwonderland
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Uwe nkịtị, yana jeans na akpụkpọ ụkwụ